Home / Interior design / Biriky maitso sy tsanganana mena, ny fanehoana zavakanto ny maritrano nentin-drazana│IN.X Volavola
2021 / 05 / 23 FisokajianaInterior design 6001 0
Tamin'ny taona 2020, teo ambanin'ny ezaka niarahan'i Guo Dong, mpitantana ny hetsi-panoherana faharoa an'ny HUDA Restaurant, ary ny IN.X, ny trano fisakafoanana lehibe HUDA eo amin'ny Guijie Street dia nahavita ny fanamboarana voalohany ny habaka tao anatin'ny 20 taona.
Rehefa nisokatra ho an'ny orinasa indray izy dia nisaona ny mpamorona Wu Wei ny filaharana be olona, ​​saingy nilaza ihany koa izy fa tena andrasana izany.
Ny programa voalohany dia in-droa nanontaniana
Tsy nanova toerana ny farany
"Miomàna amin'ny fahafaha-manomboka indray ny olona rehetra." - Na dia nieritreritra an'izany aza i Wu Wei dia mbola nandefa hafatra toy izany tamin'ireo mpamolavola ekipa talohan'ny dinika farany.
Tamin'ny faran'ny fivoriana voalohany dia neken'ny rehetra ny volavola, nefa taty aoriana dia nihaona tamina fanontaniana roa feno izy - ny mpampiasa sy ny manampahaizana dia nanalasala fisalasalana momba ny làlan'ny fijerin'ny HUDA vaovao, ny mari-pahaizana momba ny zavakanto, ny fitsaboana ny fomban-drazana ary ny ankehitriny , sy ny sisa.
Tamin'ny serasera maro, ny valin-tseranana teo ambany fanerena dia namaly hoe: “Amin'ity indray mitoraka ity, hijoro isika amin'ny ho avy hijery ny HUDA ary hisambotra ny mpanjifa sy ny tsena rahampitso.” Rehefa voaresaka mazava tsara ny lozisialy fandaharana iray manontolo dia voaray ihany ny valiny - "Satria feno be ny hevitrao dia andao hanaraka ny fandaharana voalohany."
Vokatr'izany, nisokatra indray ny HUDA tamin'ny faran'ny taona lasa ary nanjary toerana mahafinaritra indray teny amin'ny araben'i Guijie niaraka tamina mpivahiny feno.
HUDA sy Gui Street
Street Làlana Dongzhimennei (Làlana Gui) tany am-piandohan'ny taona 60
Street 80 Dongzhimenne Street (Làlana Gui)
Tamin'ny 2016, Guo Dong dia nanolotra ny sampana HUDA voalohany tamin'ny fisainana "andramo". Nanomboka teo dia tsy diso fanantenana izy. Na dia tsy mahay mandaha-teny aza i Wu Wei ary mahalana mampiseho ny tarehiny eo amin'ny sehatra, dia mbola izy ihany no lasa mpamorona trano fisakafoanana manan-tsaina indrindra amin'ny faribolany sy eo amin'ireo namany.
Manomboka any ivelany ka hatrany anaty trano, ny fampiasana biriky maitso mavesatra dia manohy ny fomban'ny arabe mankamin'ny atitany. Toa mihalehibe eny ivelan'ny arabe ilay trano fisakafoanana fa tsy misy tampoka. Ao anatin'ny làlan'ny peratra faharoa, ao anaty volondavenona tsy manam-paharoa ao an-tanànan'i Beijing taloha, dia miaina isan'andro ny rivotra iainana ny trano fisakafoanana HUDA.
Ao anatin'ny trano fisakafoanana, ny zavakanto koa dia mifindra avy amin'ny zavatra fanaka manokana mankany amin'ny toerana macroscopic kokoa.
Ny mena sy volondavenona maneho ny tanànan'i Beijing, ny maritrano nentin-drazana efa namboarina, ny fandikana indray ny patio sy ny atiny, ny mangarahara sy malama ny tsipika fivezivezena, ny fihetsiky ny mazava sy ny aloka tsy mihetsika, ny fiovan'ny lanitra sy ny mpandeha an-tongotra ivelan'ny ny varavarankely, ny fanitarana ny asan'ny ao anatiny, ny fanovana ny ora fanaovan-jiro, ary na ny fanjavonan'ny fisarahan-toerana eo amin'ny samy lahy na samy vavy ao an-trano fandroana aza dia fanehoana zava-kanto misimisy kokoa ao amin'ny endrika.
Ny toerana ara-jeografika sy ny tantaran'ny fizahan-tany dia nanisy marika ny HUDA miaraka amina kolontsaina mavesatra. Io no hery azony mindrana, noho izany ny famolavolana ny habakabaka mihitsy dia maivana sy milamina kokoa.
“Ny hevitra noforoninao?”
"Manamboatra trano ho an'ny afomanga an-drenivohitra"
Ny HUDA nohavaozina dia voalohany indrindra manentana sy mahafinaritra. Ny famolavolana arsitektur faharoa dia mizara ny trano fisakafoanana toa ny maze tany am-boalohany ho faritra mazava, ary ireo faritra samihafa dia mifandray. Ary na aiza na aiza no ipetrahanao, ny tara-masoandro sy ny fijerena ivelany dia ampahany amin'ny firafitr'ilay faritra.
Ny lalantsara miorina amin'ny gadona mifangaro kokoa dia manolo ny lalamby taloha. Ireo lalamby ireo dia lasa teboka tsara indrindra hijerena ny masony amin'ny alàlan'ny varavarankely hatramin'ny gorodona ary amin'ny alàlan'ny tontolo ivelany.
Ny velaran'ny biriky maintso dia misy sosona somary ambany nefa manankarena miaraka amin'ny firakotra hazavana sy aloka ary antsipirian'ny fanapahana. Ilay mena voarara Forbidden City, izay afaka maneho ny tsiron'ny HUDA sy ny renivohitra, dia misambotra olona fisakafoanana amin'ny alàlan'ny tohatra manintona ny masony. Natao hiantehitra amin'ny tsipika fivezivezena mazava eny amin'ny habakabaka izy io, ary ny fahitana dia ny lanjany fanampiny.
Ny bara dia nampiana ho faritra miasa vaovao, manampy ny fiasan'ny faritra iandrasana ary manampy ny fahaveloman'ny tanora HUDA. Ny fandroahana ihany koa dia ny faritra fidiovana tsy hay lazaina. Ny lokon'ny jiro amin'ny antoandro, fotoam-pisakafoanana ary fisakafoanana hariva dia miovaova mba hanovana ny toe-po sy ny andro.
Ny fitaovana nentim-paharazana dia ampiasaina betsaka, fa izy ireo dia adika amin'ny teknika maoderina sy ny endriny mba hanomezana azy ireo fahatsorana sy fahamaotinana ankehitriny. Ity fahatsapana ankehitriny ity dia mitombo avy amin'ny toerana tsotra indrindra, miaraka amin'ny rivo-maherin'ny afomanga, ary koa amin'ny endrika an'ny HUDA sy Guijie.
Feno mpitsidika ny arabe Gui, ary lamaody efa ela ny miandry adiny roa na telo mandritra ny latabatra eo ambanin'ny takelaka HUDA velona.
Nandritra izay 20 taona lasa izay, ny HUDA dia nanjary marika fisakafoanana misolo tena an'i Guijie, ary na dia i Beijing aza, ho marika fisakafoanana miaraka amin'i Guijie. Manoloana ny mpanjifa ho avy tsy miovaova sy ny filàna vaovao amin'ny faritra sy ny tanàna ho an'ny kolontsaina fisakafoanana, ny HUDA dia tsy maintsy mamita fanavaozana mba hiantohana ny fahavelomana maharitra kokoa.
Ny paikadin'ny trano fisakafoanana trilogy dia andiana paikady famolavolana natolotry ny mpamorona Wu ho an'ny marika fisakafoanana matotra. Manampy ny marika hamita ny fanavaozana ny marika amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny habaka amin'ny fomba kendrena izany, ary avy eo hahatsapa ny sandan'ny fanomezam-pahefana mitohy ho an'ny marika matotra.
Anaran'ny tetikasa: HUDA General Store
Famolavolana anatiny: Design IN.X
Mpamorona endrika: Wu Wei
Ekipa mpamorona: Liu Chenyang, Jia Qifeng, Li Yan
Fitaovana anatiny: Jin Shengxu, Song Jiangli, Ying Zheguang
Famoronana jiro: Zhu Haiyan
Faritra tetikasa: 1050 metatra toradroa
Saripika momba ny tetikasa: Zheng Yan
Lahatsary momba ny tetikasa: Manidina
Tetikasa momba ny tetikasa: masoivohon'ny paikady marika Yue
Paikady voalohany, famolavolana faharoa
Ny famolavolana paikady ara-barotra mety dia paikady lehibe iray ahazoan'ny orinasa tombony fifaninanana maharitra amin'ny indostrian'izy ireo. Ny paikady mazava sy ny famolavolana paikady dia fomba mahomby handresen'ny marika ireo dingana rehetra amin'ny ady an-tsena sy marika. Amin'ny fitantanana tetika fandraharahana, mizara ny marika ho dingana telo samy hafa izahay: mpandraharaha, fitomboana ary fahamatorana. Misy paikady mifandraika amin'ireo dingana telo samihafa.
Ny paikadim-barotra dia toy ny ady amin'ny fampandrosoana ny marika amin'ny ankapobeny, ary ny dingana tsirairay amin'ny fitomboan'ny marika dia azo raisina ho toy ny ady. Ady avokoa ny seho fampisehoana tsirairay. Amin'ny alàlan'ny paikadin'ny tetikady ankapobeny ihany, ny ady tsirairay dia hanana fomba fiasa amin'ny antsipiriany sy mazava kokoa amin'ny ady. Ary ity paikady sy torolàlana ity dia hanampy ny marika amin'ny ady tsirairay hanazavana ny tanjona. Izany hoe ny famolavolana habakabaka tsirairay mifanaraka amin'ny paikadin'ny orinasa dia manana fepetra famaritana mazava. Amin'izany fomba izany dia afaka mandresy ny ady tsirairay, handresy ny dingana tsirairay amin'ny ady amin'ny fifaninanana tsena. Izany dia hanampy amin'ny farany ny marika hahazoana fahavelomana maharitra, ka hijoro amin'ny fifaninanana masiaka eo amin'ny tsena.
Wu Wei, tompon'ny famolavolana ny habakabaka fisakafoanana ao an-toerana, ny talen'ny famoronana IN ary mpamorona. Nahatratra fiaraha-miasa stratejika akaiky izy niaraka tamin'ny marika fisakafoanana malaza maro tany Sina.
Manolo-kevitra ny fampiasana endrika hamolavola marika izy, manambatra ny fisainana orinasa, mifantoka amin'ny tantara sy ny fanavaozana ny marika, mampiditra ny lanin'ny fotoana, ary manome vahaolana voadinika tanteraka. Mandritra izany fotoana izany dia tonga vavolom-belona amin'ny fanovana sy fanovana ny marika vaovao amin'ny sakafo sy zava-pisotro sinoa izy.
Previous :: Fandikana habaka misy loko, fahatsapana ny fiainana mifoha | Haili Design Next: Toerana atsinanana mahay mandanjalanja sy milamina miaraka amin'ny haben'ny rivotra sy ny gadona│Fandinihana an'i Milo
2021 / 08 / 15 5768
2021 / 08 / 14 5320
2021 / 08 / 14 5055